पूर्व सेनापतिलाई मृत्युदण्ड, तीन दिनसम्म झुण्ड्याइने छ मुशर्रफकाे शव — Imandarmedia.com
१चीनले विश्वकै सबैभन्दा ठूलो बाँध ब’म पड्काएर उडाइदियो
२रामचन्द्रलाई अब प्रकाशमान बाधक, शेखरले गरे ‘ब्याक’ हुने संकेत
३विवादले घेरिन थालेपछि प्रचण्डलाई बम्पर सरप्राइज दिने तयारी
४इच्छाराजको सम्पत्ति बारे नयाँ खुलासा, यस्तो छ ईच्छाराजको सबैलाई चकित पार्ने सम्पत्ति विवरण
५भारतले दावी गर्दै आएको लिपुलेकमा चिनियाँ सेनाको प्रवेश, भारतमा तरंग
६हेलिकोप्टर दुर्घटनाको सम्भावित कारण खुल्यो, थाहा पाउने सबै चकित
७लिङ्देन नेतृत्वको पहिलो बैठक, कमल थापालाई काउन्टर दिन भए यस्ता निर्णय
८चीनमा उपचार गराईरहेका वर्षमान पुनले सुन्न पर्यो अर्को दुःखद खबर
९सेना प्रमुख चढेको हेलिकप्टर दुर्घ’टना ग्रस्त, के छ अबस्था ?
१०कांग्रेसको महाधिवेशन प्रतिनिधिहरूको प्रारम्भिक नामावली सार्वजनिक
११एमाले केन्द्रीय कमिटीमा नयाँ अनुहारको बाहुल्य, पुराना नेतालाई खाना रुचन छोड्यो
१२‘आत्महत्यागर्ने’ मेसिन संचालनमा, कसरी गरिन्छ ‘आत्महत्या’?
पूर्व सेनापतिलाई मृत्युदण्ड, तीन दिनसम्म झुण्ड्याइने छ मुशर्रफकाे शव
एजेन्सी। गत मंगलबार पाकिस्तानमा देशद्रोह मामलामा पूर्व राष्ट्रपति एवं पूर्व सेनाध्यक्ष जनरल परभेज मुशर्रफलाई मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको विशेष अदालतले बिहीबार विस्तृत फैसला सार्वजनिक गरेको छ ।
१६७ पृष्ठको उक्त फैसलामा ‘सजाय कार्यान्वयन गर्नुभन्दा पहिले यदि मुशर्रफको मृत्यु भयो भने उनको शव घिसारेर ल्याएर चौडाहामा तीन दिनसम्म राखेर फाँसीको फन्दामा झुण्ड्याउनू’ भनिएको छ ।
मुशर्रफले यदि विशेष कमिशन दुबई आएर बयान लिन्छ भने आफू त्यसका लागि तयार भएको मुशर्रफले बताएका छन् । उनले बयान दर्ता गर्न अनुरोध गरे पनि त्यसलाई अदालतले मानेन। मुशर्रफले पाकिस्तानको न्यायीक व्यवस्थाको सम्मान गर्ने पनि बताएका छन् । उनले कानुनका अगाडि सबै बराबर भएको पनि मानेका छन्।
उनले प्रधानन्यायाधीश खोसाले फैसला सुनाउन हतार गरेको आरोप पनि लगाएका छन्। मुशर्रफले भने, ‘जुन न्यायाधीशले मेरो कार्यकालका समयमा निजी फाइदा उठाएको छ उसले कसरी मेरो विरुद्धमा फैसला दिन सक्छ ?’
मुशर्रफले कानुनी सल्लाह लिएर मात्र अगाडि कसरी बढ्ने भन्ने योजना तयार गर्ने पनि बताएका छन्। उनले पाकिस्तानी जनता र सैन्य बललाई आफ्नो सेवा याद गरेकामा धन्यवाद पनि दिएका छन्।
मुशर्रफमाथि यो फैसला अदालतले गर्छ भन्ने अनुमान कसैले पनि गरेका थिएनन्। अहिलेको इमरान खान नेतृत्वको सरकारले पनि गरेको थिएन। यसलाई विश्वभरमै ‘सरप्राइज डिसिजन’ भनिएको छ।
यसैगरि, अमेरिकी समाचार च्यानल सिएनएनको एक रिपोर्टअनुसार अमेरिका अफगानिस्तानमा सैन्य र खुफिया अभियानको लागि पाकिस्तानको हवाइ षेत्र प्रयोग गर्नको लागि एक औपचारिक सम्झौता गर्दैछ । शनिबार सार्वजनिक भएको यो रिपोर्टले यस क्षेत्रमा नयाँ तरंग ल्याएको छ ।
रिपोर्टअनुसार पाकिस्तानले कथित रुपमा आफ्नो आतंकवादरोधी प्रयास र आरतसँगको सम्बन्धमा सहयोगको बदलामा अमेरिकासँग एक सम्झौतामा हस्ताक्षरको इच्छा देखाएको छ ।
रिपोर्टका अनुसार अमेरिकाको कंग्रेसलाई शनिबार यस सम्बन्धमा जानकारी दिइएको छ । यद्यपि पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले पाकिस्तान र अमेरिकाको बीच यस्तो कुनै पनि सम्झौता हुन लागेको कुरा अस्वीकार गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
विदेश मन्त्रालयले दुईै देशबीच यस्तो कुनै सम्झौता नभएको भनेको छ। यद्यपि मन्त्रालयले क्षेत्रीय सुरक्षा र आतंकवादविरुद्धको युद्धका लागि दुई देशबीच दीर्घकालीन सहयोग कायम रहेको भनेको छ।
यो रिपोर्ट यस्तो समयमा आएको छ जतिबेला अफगानिस्तानबाट आफ्ना सैनिक फर्किएपछि अमेरिकालाई आइएसआइएस र अन्य चरमपन्थी समूहहरुविरुद्ध अफगानिस्तानमा आतंकरोधी अभियान चलाउन कठिनाइ भइरहेको छ।
तालिबानले गत महिना अमेरिकालाई चेतावनी दिँदै यदि उसले अफगानिस्तानमाथि ड्रोन उडाउन बन्द नगरे यसको नकारात्मक परिणाम हुने भनेको थियो।
अफगानिस्तानमा तालिबानको नियन्त्रणपछि चरमपन्थी समूह आइएसआइएसको आक्रमण बढेका छन् । अन्तरिक तालिबान सरकारले आइएसआइएससँग लड्नको लागि अमेरिकी सहयोग लिन अस्वीकार गरेको छ र आफू यससँग लड्न सक्षम भएको बताएको छ ।
तर अमेरिकालाई तालिबान शासनमा चरमपन्थी संगठन बलियो हुन सक्ने र अन्तर्राष्ट्रिय आक्रमणको लागि अफगानिस्तानको प्रयोग गर्न सक्ने आशंका छ। हवाइ क्षेत्रमा सहयोगको लागि पाकिस्तान र अमेरिकाबीच पहिले नै सहयोगका विषयमा एक रुपरेखा तयार छ ।
यसअघि जून महिनामा पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयका एक प्रवक्ताले २००१ देखि पाकिस्तान र अमेरिकाबीच एलायन्स अफ कम्युनिकेसन र ग्राउण्ड लाइन्स अफ कम्युनिकेसनमा एक रुपरेखा रहेको बताएका थिए । यस्तोमा कुनै नयाँ सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न नसकिने उनको भनाइ थियो।
एमाले केन्द्रीय कमिटीमा नयाँ अनुहारको बाहुल्य, पुराना नेतालाई खाना रुचन छोड्यो